သားကြီး | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / သားကြီး
Category Archives: သားကြီး
သာကြီး – ပီယဆေး (2014) [Album]
Quality: 320kbps MP3 ၀၁။ ယီယ​ဆေး​ (feat. ​ဂျောက်ဂျက်) ၀၂။ နောက်ဆုံးအချစ် (feat. ASH) ၀၃။ Celebrity Love (feat. ​​ကျော်ထွဋ်ဆွေ) ၀၄။ သူ့​ဘေး​နား​ ၀၅။ သီချင်းနဲ့မင်း (feat. မိစန္ဒီ) ၀၆။ ​ထောက်ဆူး​ ၀၇။ တစ်သက်လုံးစာ ၀၈။ နယ်လွန်အိပ်မက် ၀၉။ အသိပေးကြေညာချက် (feat. Double Nyi) ၁၀။ တမ်းချင်း ၁၁။ ဘုရား​သိတယ် (feat. ​တေဇ MC) ၁၂။ မျှော်တော်ယောင်ပတ်ပျိုး (feat. ထိန်ဝင်း​) [Bonus Track] ၁၃။ အာကာသအနမ်း (Bonus Track) [Download Whole Album] (Shared) [Download … Continue Reading →
February 13, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) သားကြီး Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
ထွန်းထွန်း – Superstar [Album]
၀၁။ Superstar ft. စင်ဒီ ၀၂။ တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ ၀၃။ ပြေး ၀၄။ တစ်ယောက်သောသူ ၀၅။ ရင်ခုန်ချင်အနားနားတိုး ft. သဇင် ၀၆။ မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်း ft. သားကြီး ၀၇။ မလုံလောက်ဘူး ၀၈။ ယောင်္ကျားသဘာဝ ft. လွှမ်းပိုင် ၀၉။ နင် ငါ့ပုံစံမကြိုက်တာငါသိတယ် ft. စန္ဒီမြင့်လွင် ၁၀။ မွေးနေ့အချိန်အခါ ၁၁။ လှုပ်ရင်းခါ ft. လွှမ်းပိုင်၊ Bobby Soxer ၁၂။ နားလည်ပေးပါ ft. ထိန်ဝင်း၊ ချမ်းချမ်း ၁၃။ အကြီးကြီး ft. ထိန်ဝင်း ၁၄။ ထင်အောင်ထွန်း Download Whole Album [Mirrorcreator] Hulkshare Links 01 … Continue Reading →
June 4, 2012 MMA အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) စန္ဒီမြင့်လွင် စင်ဒီ ထိန်ဝင်း ထွန်းထွန်း(Example) ချမ်းချမ်း လွှမ်းပိုင် သဇင် သားကြီး Bobby Soxer Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
အချစ်မဟုတ်ဘူး(ကောင်းပြည့်) ချစ်ရတဲ့ချစ်သူ(မယ်လိုဒီ) မနှုတ်ဆက်နဲ့(သိန်းလင်းစိုး) တစ်ဦးတည်းသောချစ်သူ(မိုးယုစံ) အရာမယွင်းသော(ဒီသြ) တိုးတိုးလေးပဲ(နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း) ချစ်ရင်ပြီးတာပဲ(ကောင်းပြည့်+သဇင်) ဒီနေ့ပဲ(Hemale) အပျိုစင်(အိမ့်ချစ်) နတ်မိမယ်(သားကြီး) မင်းတစ်ယောက်တည်း(MHL) ဆုပ်လည်းဆူးစားလည်းရူး(သဇင်) ကျေနပ်ပါတယ်(ညီညီ) ဂိုးသွားပြီလား(ခွန်းဆင့်နေခြည်) မင်းနဲ့နီးဖို့(သူရလင်း) မင်းအတွက်မျက်ရည်(ကောင်းပြည့်) နောင်တမီး(ဟိဏ်းသစ်) သစ္စာ(နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း) Download With Mediafire
March 26, 2012 [email protected] အိမ့်ချစ် အခွေ (အများ) သားကြီး MHL Myanmar Artist New Myanmar Albums 1 Comment
အလွမ်းဖွဲ့အိမ်မက် ( သားကြီး + MHL) MTV
Song Name: အလွမ်းဖွဲ့အိမ်မက် Artist: သားကြီး , MHL ဒါရိုက်တာ-သားကြီး Download With Minus CREDIT TO MHC
March 23, 2012 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) သားကြီး MHL MTV Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
ဆယ်ပုံတစ်ပုံ ( သား ကြီး )
ဆယ်ပုံတစ်ပုံ – သားကြီး လေထဲလွှင့်လိုက် နှစ်ယောက်တည်း အလွမ်းတွေ( Interlude) အလွမ်းတွေ( Part II ) ဖုန်း အဝေးမှာ( feat- Thein Linn Soe & MHL ) ငါ့ရဲ့မိန်းကလေး Feat- Bu Thee မင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ မဝေးချင်ဘူး တကောက်ကောက်လိုက်မယ်Feat- Bobby Soxer အိမ်မက်မဟုတ်ပဲ ကိုယ်တော်ရှိတယ် (Bonus Track) Download Whole Album With Mediafire Download With Hulkshare Rar Password : www.myanmarhiphopchannel.com Credit To MHC
January 6, 2012 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) သားကြီး New Myanmar Albums 1 Comment
ရင်ခုန်နေဆဲ ထိုကြောင့်ဝေးရသည် ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ မင်းရဲ့စိတ်နဲ့ငါရူး အချစ်ကြေငြာစာတမ်း မသိသလို လူတွေအကုန်သိတယ် မျိုသိပ်ခြင်းမီးခိုး လွယ်လွယ်လေး စက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး နီးနီးလေး ကိုတေလေ Download Link Mediafire Link Mirrorcreator
August 22, 2011 thant zin win အိမ့်ချစ် အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) သားကြီး J-Me New Myanmar Albums5Comments
Gateway – နံပါတ်(၁)ဦးစားပေး (First Priority)
01. လိမ္မာအောင်နေပါတော့ – Gateway 02. ရွက်လွှင့်တော့မယ် – Gateway 03. မကျီစားနဲ့ – သားကြီး 04. ငါနဲ့အတူ – Gateway 05. မမျှော်လင့်ဘဲ – Gateway 06. ဒါပေမယ့်… မင်းကိုငါလွမ်းတယ် (But I Miss You) – Kutti 07. ကျိန်စာသင့် – Gateway 08. နောက်ဆုံးတောင်းပန်ခြင်း – MHL 09. အခွင့်အရေးမဲ့သော… ချစ်ခြင်းတစ်ခု – ရဲလေး 10. ငါတို့အားလပ်ရက် – Gateway (Featuring: မိစန္ဒီ) 11. ရင်ခွင်ဟောင်းဆီသို့ (Gateway) 12. ရင်ကိုလှုပ်ခတ်သွားခဲ့သူ (သိန်းလင်းစိုး) the … Continue Reading →
June 26, 2011 စိုင်းညီဖြိုး ရဲလေး မိစန္ဒီ သိန်းလင်းစိုး သားကြီး MHL New Myanmar Albums ရဲလေး မိစန္ဒီ သိန်းလင်းစိုး သားကြီး Gateway Kutti MHL7Comments
MYMC Playlist: အဝေးကချစ်သူ
ဒီ Playlist ကတော့ ရေခြားမြေခြားက ချစ်သူကိုသတိရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ကိုထားပြီး အဝေးထွက်သွားတဲ့ချစ်သူကို ပြန်တမ်းတတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခံစားချက်သီချင်းလေးတွေကို စုစည်းပေးထားပါ။ Pop နဲ့ R&B သီချင်းအများစု ထည့်ထားတာကြောင့် ကြိုက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ ၁။ စလုံးကချစ်သူ –9One ၂။ လေပြေ – အေသင်ချိုဆွေ ၃။ မင်းနားမှာနေချင်တယ် – Air Air | MHL ၄။ တိမ်တွေလို – Cosy ၅။ လမင်းသို့ – အောင်ကောင်းထက် | ရေဗက္က၀င်း ၆။ မင်းတစ်ယောက်တည်း – Cosy | Blueberry ၇။ အဝေးရောက်ချစ်သူ – D ဖြိုး | David … Continue Reading →
May 30, 2011 amedeo 9one စိုင်းစိုင်း ထိန်ဝင်း ရဲလေး ရသ အောင်ကောင်းထက် အေသင်ချိုဆွေ စောညီညီ ရေဗက္က၀င်း မိုးမိုး ဟဲလေး သိန်းလင်းစိုး သဇင် သားကြီး AH.BOY Bunny Phyo D ဖြိုး Dယံ Jenny MC Freddy Media2Comments
September 19, 2010 MyanmarHipHopChannel.Com အဆိုတော် (ကျား) ရသ ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ သိန်းလင်းစိုး သားကြီး G Tone J-Me Myanmar Artist Unreleased Albums Waiလျှံ5Comments